Mipaka any ifotony ny fahalovana… | NewsMada
Mipaka any ifotony ny fahalovana…
Hanao ahoana ihany izy ity? Tsy inona fa ny raharaham-pirenena, ny fiainam-bahoaka… Tsy hita be ihany? Toa arakaraka ny maha antomotra ny fifidianana, vao miseholany avokoa io zava-manahirana sy hafahafa be ihany io.
Anisan’ny mahabe adihevitra ny amin’izany, ohatra, ny tsy fandriampahalemana, indrindra ny amin’ny fakana an-keriny. Amin’izao, na ny teratany malagasy sy ny any ambanivohitra aza, misy manao takalon’aina hahazoana vola.
Nahoana loatra? Eo aloha ny milaza ary saika itovitovian’ny rehetra ny hoe ataon’ny sasany fitadiavana fotsiny izao ny fanaovana takalon’aina amin’ny fakana an-keriny. Tsy hita tsinona izay tena afitsoky ny mpitondra fanjakana?
Tafapaka any ifotony amin’ny olon-tsotra any ambanivohitra ny alaina an-keriny sy atao takalon’aina, mizaka izany hatramin’ny zaza amam-behivavy… Efa tsy manana atahorana intsony ny sasany? Na tsy mahalala afa-tsy vola…
Eo ihany ny fahasahiranam-piainana fa mety misy antony hafa ao: fanakorontanana amin’izao ankatoky ny fifidianana izao? Misy aza milaza afa atao fitadiavam-bola hoenti-manana ny fifidianana, hono, ny fakana an-keriny.
Tombantombana avokoa izany fa izy manao azy ihany no tena mahalala izay manetsika sy manesika azy hamoa-doza. Na izany aza, tsy takona afenina ny fahalovana eo amin’ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka.
Anisan’izany ny fahantrana lalina sy maharitra mahazo ny vahoaka ifotony. Nefa izay mahantra velona ve no manao fakana an-keriny? Nefa misy aza ny mpanefoefo noho ny fanaovana takalon’aina amin’ny fakana an-keriny.
Fositra koa ny famahana ny olana amin’izay manahirana rehetra amin’ny alalan’ny vola: izay mihetsika sy atao rehetra, alamina amin’ny vola. Mandeha ho azy amin’izany ny kolontsaina amin’ny fitiavam-bola, mitantana fa tsy tantanina.
Izany no fototr’io tsy fanjariana rehetra io: fanondinkodinam-bola, kolikoly, fividianana olona… Amin’ny alalan’ny tsy fahamarinana io, herisetra… Inona ny vahaolana fa mipaka any ifotony izao ny fahalovana… tsy voalamin’ny vola?